RIKOODH CUSUB: Kulanka Derby D’Italia oo dad iyo dakhliba u kordhay! (Eeg kharashka & ka qaybgalka) – Gool FM
RIKOODH CUSUB: Kulanka Derby D’Italia oo dad iyo dakhliba u kordhay! (Eeg kharashka & ka qaybgalka)
Raage September 19, 2016
Foto LaPresse - Daniele Badolato 18/09/2016 Milano ( Italia) Sport Calcio Inter - Juventus Campionato di Calcio Serie A TIM 2016 2017 - Stadio "Giuseppe Meazza" Nella foto: schieramento Photo LaPresse - Daniele Badolato 18 September 2016 Milano ( Italy) Sport Soccer Inter - Juventus Italian Football Championship League A TIM 2016 2017 - "Giuseppe Meazza" Stadium In the pic: team line-ups
(Milano) 19 Sebt 2016 – Kulankii Derby D’Italia ee ay xalay ciyaareen kooxaha Inter Milan iyo Juventus ayaa rikoodh dhanka dakhliga ah dhigay kaasoo ku dhow 4 milyan oo euro, taasoo ka badan sanadkii hore.
Kooxda Inter ayaa kulankaa ku dishey kooxda Juventus, balse waxay sidoo kale u dabbaal degtey qiimaha kasoo qaybgalka kulanka iyo dakhligiisa oo labaduba kordhay waxaana kulankaa Serie A-da ah kasoo xarooday 3,943,518 oo Euro.
Kasoo qayb galayaasha ciyaarta ayaa iyaguna cajiib ahaa waxaana kulankaa kasoo xaadiray taageerayaal dhan 76,484 oo qofood.
18/09/2016 Milano ( Italia)
Campionato di Calcio Serie A TIM 2016 2017 – Stadio “Giuseppe Meazza”
Nella foto: schieramento
18 September 2016 Milano ( Italy)
Italian Football Championship League A TIM 2016 2017 – “Giuseppe Meazza” Stadium
In the pic: team line-ups
"Waxaan u dagaalami doonaa sidii waqti dheer aan ku sii joogi lahaa Real Madrid" - James Rodriguez
Guardiola oo balan qaaday in Leroy Sane uu ku soo bilaaban doono kulanka Swansea City